မိန်းကလေးများအတွက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မိန်းကလေးများအတွက်
Posted by Moe Z on Nov 24, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.., My Dear Diary, Society & Lifestyle | 30 comments
ဦးဦးဘလက်ရဲ့တံခါးစောင့်ပို့စ်ကိုဖတ်ပြီးတော့ မိုးစက်ရဲ့ဘတ်စ်ကားစီးတဲ့အတွေ့အကြုံကို ပြန်ရေးဖို့သတိရတယ်။ အထင်မလွဲကြပါနဲ့ မိုးစက်ကသူများအတွက် သူရဲကောင်းဝင်လုပ်ပေးခဲ့တာပါ ။ ရန်ကုန်မြို့မှာနေပေမယ့် ရုံးကအကြိုအပို့လုပ် ပေးလို့ ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ လိုင်းကားစီးရတဲ့ဒုက္ခမှကင်းဝေးပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေစီးရင်လည်း ပြဿနာမျိုးစုံကြုံရ တတ်တယ် ကိုယ်ကပဲသူများကိုဒုက္ခပေးခဲ့တာများတယ်။ ကားပေါ်အလုအယက်တက်ရင်း သူများခြေထောက်ကို တက်နင်းမိတာမျိုး၊ ပြိုင်ပွဲဝင်သလိုမောင်းနေတဲ့ကားက ဘရိတ်ဆောင့်အုပ်လိုက်ရင် အနားကလူကိုဝင်တိုက်မိတာမျိုးက အမြဲတမ်းဖြစ်နေကြ။ တစ်ရက်တော့ရုံးကပြန်လာပြီး အိမ်ရောက်မှ memory stick လေးရုံးမှာကျန်ခဲ့တာသတိရတယ်။ မနက်ဖြန် presentation အတွက်ပြင်နေတာ တစ်ဝက်ပဲပြီးသေးတယ် ဒီညဆက်လုပ်ရမှာမို့ သွားပြန်ယူမှရမယ်။ အသွားကိုတော့ စိတ်လောနေတာနဲ့ ကားငှားသွားလိုက်တယ်။ အပြန်မှာတော့ မိုးစက်လည်းကားဂိတ်အရောက် အဓိပတိတစ်စီးလည်းရောက်ဆိုတော့ တက်လိုက်ခဲ့တယ်။ taxi ခ ၁၅၀၀ သက်သာလည်း နည်းလားနော်။ ကားကတော့ ထုံးစံအတိုင်းပဲ ကြပ်ပါတယ်။ မိုးစက်လည်းကောင်မလေးတစ်ယောက်ဘေးမှာ ၀င်ရပ်လိုက်တယ်။ ကျောင်းသူလေးပါ အဖြူအစိမ်းနဲ့ ကျူရှင်ကပြန်လာတာထင်တယ်။ အစကတော့ အပြင်ကိုပဲကြည့်ပြီးလိုက်လာရင်း ဘာရယ်မဟုတ် ကောင်မလေးကိုကြည့်မိတော့ ငိုတော့မယ့်မျက်နှာလေးနဲ့ မိုးစက်ကိုမော့ကြည့်ရှာတယ်။ ဒါနဲ့မိုးစက်လည်း နည်းနည်းပေါက်သွားပြီး သူ့နောက်ကိုကြည့်မိတော့ အသက်၃၀ကျော်လောက်ထင်ရတဲ့ လူတစ်ယောက်။ ကလေးမလေးရဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးကို သူ့ကိုယ်နဲ့မိုးပြီးကာပေးထားတဲ့ပုံမျိုး မသိရင်သူနဲ့ပတ်သက်သလို အတင်းကပ်နေတာ။ ကောင်မလေးကိုပြန် ကြည့်တော့ မျက်ရည်တွေဝဲနေပြီ။ မိုးစက်လည်း သည်းမခံနိုင်တော့တာနဲ့ (ရုံးကားအားကိုးနဲ့စီးဖြစ်တဲ့) ဒေါက်အချွန်နဲ့ သူ့ရဲ့ခြေထောက်ကို အသေအချာနင်းချပစ်လိုက်တယ်။ သူ့ဆီက အားဆိုတဲ့အသံ ခပ်အုပ်အုပ်ထွက်လာတော့ လူတွေက၀ိုင်းကြည့်ကြတယ်။ မိုးစက်လည်းလုပ်ပြီးမှ နည်းနည်းလန့်သွားတယ် ကိုယ့်ကိုမှတ်မိပြီးပြန်တွယ်မှာကြောက်လို့။ ဒါနဲ့သူ့ကိုခပ်တည်တည်နဲ့ပဲ ဆောရီးနော်မတော်လို့ ကားကတော်တော်ကြပ်တယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။ အဲဒီလူကဘာမှပြန်မပြောဘူး မျက်နှာကြီးကတော့ရှုံ့ခွက်ပြီး လွတ်တဲ့နေရာကိုပြောင်းသွားတယ်။ ကောင်မလေးကတော့ မိုးစက်ကို ကျေးဇူးတဲ့။
နောက်တစ်ခါကတော့ ကားပေါ်မှာမဟုတ်ဘူး လမ်းပေါ်မှာ။ မိုးစက်ရဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က နိုင်ငံခြားကခဏပြန်လာလို့ သွားတွေ့တာ။ သူ့အိမ်ကတစ်လမ်းပဲခြားတယ် ပြန်လာတော့ည ၈နာရီခွဲနေပြီ။ လမ်းထိပ်ရောက်တော့အုတ်ခုံမှာ ယောက်ျားလေးတွေ ၄ ယောက်ထိုင်နေကြတယ်။ အိမ်ကိုလည်းလှမ်းမြင်နေရပြီဆိုတော့ သူတို့ရှေ့က ပုံမှန်ပဲဖြတ်သွား လိုက်တယ်။ လက်ထဲမှာတော့ သူငယ်ချင်းလက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့ ရေမွှေးပုလင်းလေးပဲပါတယ်။ အဲဒီထဲကတစ်ယောက်က ထလာပြီး နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုပြီးစလာတယ်။ မိုးစက်လည်းဘာမှပြန်မပြောပဲ ခြေလှမ်းကိုနည်းနည်းသွက်လိုက်တော့ မိုးစက်ရဲ့လက်ကိုလှမ်းဆွဲတယ်။ အရက်နံ့လည်းရနေတော့ ရုတ်တရတ်တော့လန့်သွားတယ်။ လက်ထဲကရေမွှေးပုလင်းကို သတိရပြီး သူ့မျက်လုံးကိုရေမွှေးနဲ့ဖျန်းပစ်လိုက်တော့ မျက်နှာကိုအုပ်ပြီး နောက်ဆုတ်သွားတယ်။ သူ့ကိုလုံးဝ လှည့်မကြည့်တော့ပဲ အိမ်ရောက်တဲ့အထိပြေးပါတော့တယ်။ အိမ်ကလူတွေထွက်ကြည့်တော့ မရှိကြတော့ဘူး။ မိုးစက်လည်းညဘက်ဆို လမ်းထိပ်တောင်တစ်ယောက်တည်း မသွားရတော့ဘူး။ ၈ နာရီခွဲဆိုတာ နောက်မကျသေးပါဘူး တစ်ချို့ကုန်တိုက်မှာ လုပ်တဲ့သူတွေဆိုရင် ၉ နာရီကျော်မှပြန်ရတာ။ ဒီလိုလူမျိုးတွေနဲ့ တွေ့နေရတဲ့ မိကောင်းဖခင် သားသမီးတွေကို ကာကွယ်ပေးမယ့် ဥပဒေတွေ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်လုပ်ပေးရင်ကောင်းမယ်။ ဘာမှဖြစ်မလာသေးရင်တော့ မိန်းကလေးတွေ အနည်းဆုံး ရေမွှေး ဒါမှမဟုတ် စပရေးဘူး တစ်ခုခုတော့ဆောင်ထားကြပါနော်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း ဦးဦးဘီလူးဆီမှာ ကိုယ်ခံပညာ(ကိုယ်ခံရတဲ့ပညာမဟုတ်) သွားသင်ထားကြပါလို့ ကြော်ငြာပေးလိုက်ပါတယ်။
ကရင်ဂိ့ မျက်စိ..တိမ်စွဲ နေတာကိုး..
ဂီတို့ စည်တို့ တွေ သတိထားနေ……….
ဒေါက်အချွန်နဲ့ မိမယ် ………………………..
ဒေါက်မကြိက်တဲ့ အရှေ့ကျွန်းဆရာ ဆိုရင်တော့ ရေမွေးလေးရှိတယ်………….. :P…ဟင်းဟင်း
ဒေါက်မကြိုက်တဲ့ အရှေ့ကျွန်းဆရာ ဆိုရင်တော့ ရေမွေးလေးရှိတယ်………….. :P…ဟင်းဟင်း
ဂီတို့က မမမိုးဇက်ကို ဒါမိုး
ဒါနဲ့ မမမိုးဇက်က ပရီဇန်တေးရှင်း
လုပ်တယ်လား ….ဂီ့ သင်ပေးပါလားဟင်…
မမိုးဇက်ရဲ့ လုပ်ရဲတဲ့သတ္တိနဲ့ကူညီတဲ့စိတ်ကို လေးစားပါတယ်။ တော်ရုံတန်ရုံ မိန်းကလေးတွေ မလုပ်ရဲကြဘူး။ အဲဒီကျောင်းသူလေးကလည်း ဘတ်(စ်)ကားပေါ်မှာ ကိုယ့်ကိုအဲဒီလို လာလုပ်ရင် အော်လိုက်ပေါ့။ နှာဘူးကြီးလို့တစ်စီးလုံးကြားအောင်။ ရှက်လို့ ထင်ပါတယ်။
တော်သေးတာပေါ့၊ ငါ့တုန်းက မိုးစက်နဲ့ မတွေ့ခဲ့ပေလို့။ နောက်ဆို ရှုးဖိနပ်စီး၊ ဓာတ်ငွေ့ကာ မျက်နှာဖုံးစွပ်ပြီးမှ မိုးစက်နားကပ်မယ်။
တော်တယ် တော်တယ်.. အဲလို လူမျိုး သနားစရာ မလိုဘူး..
ရေမွှေးနဲ့ မတန်တဲ့သူတွေ ရေမွှေး အဖြန်းခံလိုက်ရတာ ဆိုတော့ ရေမွှေးတောင် နှမျောဖို့ ကောင်းတယ်။
ငရုတ်ကောင်းမှုန့် အရည်ဖျော်ပြီး ပုလင်းထဲ ထည့်ပြီး ဆောင်သွားကြပါလား။ ဒါမှ မဟုတ် အရက်ပြန် အဲဒါမျိုးတွေ ထည့်ပြီး ဆောင်ထားပေါ့.. အရက်ပြန်ဆိုရင်လည်း ထိခိုက် ရှနာ ဆိုရင် ဖျန်းမယ် ဆိုရင်လည်း ပိုးလည်း သေတယ်။ လာနှောက်ယှက်တဲ့ လူကို ဖျန်းရင်တော့ နှာနီပိုး နည်းနည်း သေသွားတာပေါ့။
ရေမွှေးလိုမျိုး ညှစ်လို့ အရည် ထွက်တဲ့ ပုလင်းမျိုးတွေ ကုန်ဈေးတန်း ဘက်မှာ ရတယ်။ ပုလင်း အခွံကြီးပဲ ဆိုရင် သိပ်မပေးရဘူး တဗူးမှ ၂၀၀ လောက်ပဲ ရှိတယ် ၃လက်မ ၄လက်မ အရှည်လောက်ပဲ ရှိတယ် ဆိုတော့ အိတ်ထဲမှာလည်း အတော်သင့်ဆိုတော့ မဆိုးလှဘူးပေါ့။
စတိုးဆိုင်တွေမှာလည်း ရေမွှေးပုလင်းတွေ ရှိတယ် လက်တ၀ါး အရွယ်လောက်ကို ၅၀၀ ၀န်းကျင်လောက်နဲ့ တွေ့မိထားတယ် အနံတော့ မသိဘူးနော်..
ဟုတ်ပ မမဆူးရယ် မိုးစက်ရဲ့ရေမွှေးလေးနှမျောစရာ
ပြည်တွင်းဖြစ်အပေါစားရေမွှေး ဒါမှမဟုတ် ဘော်ဒီစပရေး ဆောင်ထားရမယ်
ဟုတ်ပ.. မိုးဇစ်လေးရဲ့ … အဲ့လို သတ္တိလေးနဲ့ မဟုတ်မခံတဲ့
စိတ်ဓါတ်လေးကြောင့် ကိုရင်ခမျာ ကြိုက်မရှက်.. ငိုက်မရှက်ဖြစ်နေရဒါ…
သူ.. တို့ဆို.. သိပ်ဥပေက္ခာပြုတယ်.. ဟွန့်… ;) ;)
ကဲ ကရင်စည်သွတ်တို့ ကရင် ဂီတို့
မိုးစက်က လက်ရုံးရည်ရော( ဒေါက်ဘိနပ်နဲ့ နင်းတာ)
နှလုံးရည်ကော (ရေမွှေးနဲ့ ဖျန်းတာ)
နောက်တစ်ခါဆို တွယ်ချိတ်နဲ့ တွေ့သွားမယ်။ သတိသာထားနေကြ။
ငှဲငှဲ …..ဂီတို့က ဗူးစရာလိုဝူးလေ….
အထိအတွေ့လည်း အဲ့လို မှ ထိရတွေ့ရတာဟုတ်ဝူး …သွပ်သွပ်…
ညလေး သည်လိုလေးနေ ..ခေါင်းလေးနည်းနည်းစောင်းလိုက် ..
ဟာ ဟုတ်သေးဝူးလေကွာ …ဒီမယ် ..(မေးလေးကို ဆွဲမော့လိုက်ပါသည်…)
ညာဖက် ပုခုံးလေး နည်းနည်းမြှင့်လိုက်
အနှီ ဒါ့ပုံဆြာ များကိုလည်း ရှောင်ရှားစေလို၍ စေတနာသန့်သန့်ဖြင့်ရေးရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သရုပ်ပေါ်အောင်သာ ရေးထားခြင်းဖြစ်ပြီး ဂီသည် ထိုသို့ တခါမျှ မတခါဘူးပါ..
(ဂလိုလေးလည်းPR ပြန်လုပ်ပေးဦးမှပေါ့ အဟဲ)
ကျုပ်က landscaper ပါဗျာ ..
အဲ့လိုလည်း တခါမှ မလုပ်ဖူးပါဘူး
တကယ်လုပ်တဲ့လူက အဲလို မရေးပါဘူး မိုးစက်ရယ်။ ရေးတဲ့လူကလည်း အဲလို မလုပ်ပါဘူး။ တကယ့် ဒါ့ပုံဆရာ လူအရိုးလေး ပါ။
မိုးစက်ရေ .. အကြံကလည်းပိုင်ပါ့ … ရေမွှေးဆွတ်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့ ..ဟီးဟီး … ။
ည8 နာရီခွဲဆိုတဲ့ အချိန်က ကျွန်မတို့တွေ အိမ်ပြန်မရောက်သေးတဲ့ အချိန်မျိုးပါပဲ … ဆိုလိုချင်တာကတော့ စောသေးတယ်ပေါ့နော် … ဒါတောင် လက်ရဲ ဇက်ရဲတွေရှိပြီး ရမ်းကားနေတာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး… ။
ဒီလို မိန်းခလေးတစ်ယောက်ကို ဘလိုင်းကြီးလက်လာဆွဲရင်
တရားဥပဒေနှင့် ဘယ်လို တုံ့ပြန်သင့်သလဲဆိုတာကို လုပ်ဘို့လိုလိမ့်မယ်
နီးစပ်ရာအိမ်တွေ လူတွေကို ပြောမယ် သက်ဆိုင်ရာတွေကို ခေါ်မယ်
ဒီလို ပြန်မလုပ်ရင် ပြီးရင်ပြီးသွားတာဘဲဆိုတော့ ပ..ပျောက်သွားဘို့ ဘယ်လွယ်မဒုန်း
ကုန်သွားတာမှမဟုတ်တာဘဲကွယ် တရားနဲ့ဖြေတတ်ရင် ကုသိုလ်တောင်ရသေးတယ်
ဒီလိုမှန်းသိရင် မျက်မှန်အမဲကြီးတပ်ပြီး လက်လိုက်ကိုင်ပါတယ်
ကံကောင်းရင် သူလေးက ရေမွှေးလေးပါ ပြန်စွတ်ပေးဒယ်ဆိုဒေါ့
ဘပုကလည်း တရားဥပဒေနဲ့တုန့်ပြန်ဖို့ဆိုတာ အခြေအနေနဲ့အချိန်အခါရှိသေးတယ်
မိုးစက်တို့ဘက်က လုံးချင်းအိမ်တွေ တံခါးပိတ်ထားရင်ခေါ်မကြားအော်မကြား
အဲဒီည က ပေါ့
ဂျပန်သွား ၊ ကေသွားရှာမယ် ဆိုတဲ့
မျက်စိတွေ နီရဲ နေတာ ၊ ဘာများဖြစ်တာလိမ့်ပေါ့
အမိမြေ ကို ခွဲခွာသွားရမှာမို့ မျက်ရည်များ တောက်တောက်ကျအောင် ငိုထားလို့ လားပေါ့
အခု မိုးဇက် ပြောမှဘဲ
သူက အခု ဟိုမှာ
ဂျာရင်း လက်ကမြင်းနေတယ် ဆိုကလား
ကျုပ်က ဘာကို ဂျာရမှာတုန်း…
သည်လူဂျီးနော် ..မဟုတ်မဟတ်တွေ ပြောနဲ့
မန်နေဂျာ ကို အတိုကောက် ဂျာ လို့ သုံးကြည့် တာပါဟ
လက်ကမြင်းတာကတော့ ၊ လက်ဆော့ တာနဲ့ အတူတူဘဲ ၊ ဒါ့ပုံဆြာ ဆိုတော့လေ
မိုးစက်ရေ- အဲလို သတ္တိဗျတ္တိ ရှိတာ သဘောကျတယ်။ မိန်းကလေးဆိုပြီး နုနုနွဲ့နွဲ့ လုပ်နေမယ့်အစား အခုလို ဖြေရှင်းနည်းနိုင်တာ တော်တယ်။
မိန်းကလေးများအတွက်ဆိုတော့ အပေါ်က မန့်ထားတဲ့လူတွေက မိန်းကလေးတွေချည်းပဲထင်တယ် နော်။
ဒါထက်စကားမစပ် မမ နဲ့ တိုင်ပင်မယ်ဆိုတာကို ကြားဖြတ်ပြီး ဆင်တူဝတ်ချင်နေတဲ့လူတွေ ရှိနေတယ်။ သတိထားနော်။
မမရေ မိုးစက်က အဲဒီပွဲကိုတက်ဖြစ်ရင် အနီရောင်နဲ့ခရမ်းရောင်ကိုတွဲဝတ်မလားလို့
ဖက်ရှင်နဲ့ပါတ်သတ်ရင် ပြူပြူကြောင်သိမ်းတောင် လက်မှိုင်ချတွားစေရမယ်…
(ဟီး …နောက်ဒါဘာ ဂလိုအရောင်ရီးတော့ ၀တ်ရဲဝူး..)
တားတား စတိဂျော့ဘ်စ် လို ၀တ် အရိုက်ခံထားတာ
ဘူ့မှ ကျောနဲ့နော်. ..တိရား…
ပွဲက မဖြစ်တော့ဘူး။ စိတ်မကောင်းစရာပဲ။ ဖြစ်ရင် ခရမ်းနီဂီ ကို တွေ့ရဦးမှာ။
(တားတား စတိဂျော့ဘ်စ် လို ၀တ် အရိုက်ခံထားတာ
ဘူ့မှ ကျောနဲ့နော်) ဆိုတာကို အပြည့်အဝလိုက်နာပါတယ်။ စိတ်မပူပါနဲ့။ လင့်ခ်လေး ပေးလိုက်ရုံပါ
နောက်ကျရင် အပ်ချိတ်ပါဆောင်သွား။ ကိုယ်ခံပညာလေး အရင်သင်သွားလေ။
မန်းလေးမှာကျ လိုင်းကားမစီးချင် ဆိုင်ကယ်စီးရုံပဲ.. ရန်ကုန်ကျတော့ ..မလွယ်မလွယ် ဂျူဒိုတွေ.. ကရာတေးတွေ ..စုံအောင်တတ်ထားရမယ့်ပုံပဲ.